Gadaan Maccaa waggoota dheeraaf adda cite ture tibbana Odaa Bisilitti – Kichuu
HomeNewsAfricaGadaan Maccaa waggoota dheeraaf adda cite ture tibbana Odaa Bisilitti
Gadaan Maccaa waggoota dheeraaf adda cite ture tibbana Odaa Bisilitti
Gadaan Maccaa waggoota dheeraaf adda cite ture tibbana Odaa Bisilitti yaa’iin walga’ee jira.
Kun eebba Gadaa Maccaa Odaa Bisilitti eebbifame;Gadaan Maccaa kunis seera lallabeera.
…Caffeen kun kan keenya!
…Kan dhiibu, haa dhiisu!….
Gadaan Maccaa gaafa 21/07/2017 Gadaan Maccaa Odaa Bisilitti godaane. Gadaan kun erga addaan citee yoo xinnate waggaa 150 ni ta’a. Jiddu gala jaarraa 17ffaa Macca Tuulama irra erga adda baheen booda Abbaa Gadaa Makkoo Billiin gaggeefamuun Oda Bisil dhaabbatte. Makkoo Billii odaa Bisilitti kan amma Tumaa Bakkoo Billi jedhamu, kan tumaale 63 of keessa qabu erga tumanii booda iddoo adda addaati tumalee kana dhangaalase. Odaawwan Makkoo Billii tumaale kan itti dhangalaase Odaa Dooggii Iluu Abba Boora, Odaa Hullee Jimma yoo ta’u Makko Billiin Tulluu Walalitti diinan ajeefame. Dr. Gammachuu Magarsaa qaccee Makko Billi akka ta’ee fi bokkuun Makko Billi harka isaa akka jiru natti himee jira. Mee sirritti qoradha. Akkan dhagetti Odaan Bulluqqi Odaa Bisilli irraa fincilaan bahe.
Gadaan maccaa Makko Billin boodas jira ture. Fakeenyaf Qeesin Kaatolikii Abba Diyaa Guduuruu fi Horro keessa yeroo dheera yeroo ture umman Maccaa Gadaan akka bulu, mootii akka filatu, Ripaabilika yeroo sanitti Faranjoota biratti xinnuma beekamu akka qabu barreese jira.
Gadaan Maccaa idiology amantii fi habashaa erga dhufee Abbaan Duulaa humnaan Abbaa Gadaa irraa gaafa fudhatu laafu jalqabe.
Amma haroomsa Gadaa Oromoo haaraa kanaan deebi’ee dhaabbachaa jira. Guyyaa 21/07/2017 Faajjin Gadaa Oromo ni dhaabbata. Mariin wiixinee seera Gadaa Maccaa ni mari’atama. Seerri kun birraa dhufu miseensaa gadaa ballii fudhachuu deemun ummataaf dhiyaata. Baallii wal harkaa fuudhun Gadaa Maccaa bara 2018 gaggeefama. Guyya har’aa bakka buutonni jila gadaa godinoota Oromo Maccaa 9 irra nama 35, akkasumas Odaalee gadaa shananirraa Abbotiin gadaa, hayyonni garagaraa fi ummannii naannoo irratti argamu. Akka Abbaan Gadaa himanitti Oromoo Maccaa hundaafu waraqaan enyummaa gadaa ni kennama.
STN KENYA was live: ODUU MIRGA-BITTA
Oromia News Network – ONN is live now